VRarts စျေးကွက် | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် ဂွ | ဇန်နဝါရီ 28, 2019 | ဆုချီးမြှင့် Winners |0မှတ်ချက်များ
ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2009 တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကိုကိုးကားကုမ္ပဏီအများအပြား၏စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဧရိယာ၌အချက်, Marianese ၏ပထမနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အီတလီနှင့်ဥရောပထဲမှာဖြစ်လာ VRarts.
VRarts တစ်ဦး '' စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီထည့်သွင်း, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းစတူဒီယို, ဝဘ်အေဂျင်စီနှင့်ပုံနှိပ်ဌာနကိုအကောင်းဆုံးမှာသူတို့ရဲ့သတင်းစကားကိုဖော်ပြရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့ 360 °မှာ high-performance ကိုဖြေရှင်းချက်များအတွက် Fine Art အထူး, အညီအမျှနဲ့ကွာဟမှုမရှိဘဲ, ကြောင်းမကြာခဏသူတို့အများအပြားပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာများအကြားအမျိုးမျိုးသောခြေလှမ်းများအတွက်ထုတ်ပေးနေကြ.
အသစ်ကစျေးကွက်ဖြေရှင်းချက်နှင့်မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်မှာအမြဲဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေရေး,အသစ်ကခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်နည်းပညာများကို၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်, အဆိုပါစိတ်အားထက်သန်မှုကိုအလေးပေး, စီမံကိန်းအားလုံးအဆင့်တွင်ထင်ဟပ်, သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနိုင်ရတိုးတက်မှုများအတွက်.